Somaliland: Siyaasi C/qaadir C. Obsiiye Oo Sheegay in Siyaasadda Xisbiyadu La Mid Tahay Tii Siyaad Barre, Isbeddelna Aanay Keenayn - Wargane News
Home Somali News Somaliland: Siyaasi C/qaadir C. Obsiiye Oo Sheegay in Siyaasadda Xisbiyadu La Mid...
Siyaasi Cabdiqaadir Cali Obsiiye (Madaxweynaha Mustaqbalka) oo inta badan ka hadla hadba Arrimaha taagan iyo xaaladda dalka iyo dadka ayaa farriin culus hawada u mariyey siyaasiyiinta Musharraxiinta ah ee Xisbiyada qaranka, sidoo kalena dardaaran uu u diray xildhibaanada Golaha Wakiilada Somaliland ee buuxinaya booskii uu banneeyey Guddoomiye Cabdiraxmaan Cirro isaga oo ku baaqay in maanta dalku u baahan yahay badbaado qaran iyo is baddal rasmi ah oo umaddan lagu badbaadiyo.
Siyaasi Cabdiqaadir Cali Obsiiye (Madaxweynaha Mustaqbalka) oo Shalay Warbaahinta kula hadlayay xafiiskiisu waxa uu yidhi: “Waxa aan marka ugu horraysa baaq u dirayaa Golayaasha qaranka iyo Musharraxiinta Axsaabta qaranka. Baaqaygani ma aha kuwii aan hore halkan uga gudbin jiray ee waa mid xambaarsan qaylo dhaan culus iyo baaq waayo wakhtigan aynu maraynaa maaha wakhti aynu haysanno ummad qiiro iyo feker xambaarsan iyo damiir wanaagsan oo shaqaynaya leh. Waxa loo baahan yahay in umaddan iyo dalkan maanta la badbaadiyo, is baddal baa loo baahan yahay isagana ILAAHAY SWT isaga ayaa keenaya oo umaddiisa ku ilhaaminaya. Maanta waxa aan halkan ugu horrayn farriin uga dirayaa Golayaasha Baarlamanka. Waxaanan leeyahay Baarlamanka qabyo fara badan baa idin hor taalla. Qabyadaasi faraha badan xilkiina ka guta ayaan leeyahay oo wax ka qabta baylahda idin hor taalla. Waxaanan imika idinku boorinayaa oo idin hor yaalla ugu horrayn in umaddani hesho Musharrax Madax bannaan oo waddankan badbaadiya ayaa aad loogu baahan yahay iyo is baddal dhab ah oo umaddan dhibka ka saara. Taasina Ilaahay gacantiisa ayay ku jirtaa. Waxa aan leeyahay waar taasi sabab u noqda oo umaddiina iyo dalkiina u tudha oo u damqada. Hana la idinka helo dadkiina iyo dalkiina. Tan labaad waxa weeye, kursigan uu maanta Banneeyey Cabdiraxmaan Cirro, Guddoomiyaha Baarlamanka, waxa loo baahan yahay in ninkaasi aad dooranaysaan aad ku doorataan oo aad u eegtaan diintiisa, dadnimadiisa, daacadnimadiisa iyo caddaaladiisa iyo aamminimadiisa u eega oo ha u eegina qabyaalad iyo qudhun iyo nin jeclaysi hana u eegina xisbinimo waa waxa inna curyaamiyey ee Illaa Lixdankii fadhiidka innaga dhigay ee halkaa inna joojiyey weeyaan. Waxa aan leeyahay Ilaahay ka baqa, dadkiinana u doora qof wanaagsan oo Ilaahay garanaya oo umadan badbaadiya oo aakhiro iyo adduunba u tudha”.
“Axsaabta qaranka waxaan leeyahay Musharraxiinta ayaan la hadlayaa waxaanan leeyahay dadka ha lugoynina, dadkan in badan baad soo hor taagnaydeen siyaasaddiina is baddal kama muuqdo, is baddalna ma keenaysaan. Waayo, siyaasaddiinu waa tii Siyaad Barre. Nimaan Siyaad Barre wax la soo cunin oo aan la soo caano dhamin oo aan shaah la soo cabin ma jiro oo aan la soo shaqaynin, siyaasadda Siyaad Barrena waynu wada garanaynaa waxa ay ahayd qaybi oo xukun oo qabyaalad bay ahayd idinkuna maanta ta aad ku ololaynaysaan waa taasi waa taasi ta umaddu maanta ma mooraal jabsan yihiin ee ay u qaadan la’yihiin kaadhadhka codaynta. Arrimahaasi ay ka mooraal jabsan yihiin waxa ka mid ah in ay idinka soo taagan yihiin. Dadku maanta idinma rabaan. Umadda wakhtiga iyo jaaniska haka luminina. Dadka u banneeya baan idin leeyahay jaaniska. Waxa aan leeyahay oo aan shacabka ku baraarujinayaa. Soomaalidu waxa ay tidhaahdaa hebelkii seexday waa isagii oo soo toosay ismuu baddalin. Nimankani intaasi oo sannadood bay inna soo hor taagnaayeen. Illaa Ina Cigaal, Illaa Cabdiraxmaan Tuur, Illaa Siyaad Barre, illaa Ina Rayaale, Illaa Siilaanyahan, intaaba way la soo shaqaynayeen oo nin aan xil la hayni ma jiro. Haddii ay is baddal keenayaan taariikhdooda ayay ka muuqan lahayd. Buugaagtooda ayay ku qornaan lahayd. Wax is baddal ah oo kasoo socdaa ma jirto baan leeyahay. Shacabka waxaan leeyahay waar nin waliba sacabadiisa ayuu biyo kaga dhargaa is baddalka ilaahay baa keenaya laakiin in aan sabab u noqonaa baa loo baahan yahay. Waa in aan fadhiga ka kacnaa oo aan is baddalka innagu keenaa ilaahayna talo saaranaa”. Ayuu hadalkiisa ku soo gunaanaday siyaasi Cabdiqaadir Cali Ibsiiye (Madaxweynaha Mustaqbalka).
Deg Deg: Wariye Hassan Galaydh Oo Hada Xabsiga Loo Taxaabay